Abavelisi bezinto ezingaphantsi kwesithuthi kunye nababoneleli - iChina zangaphantsi kwezahlulo zamalungu eFektri
I-BONOVO yeNdawo yokuThuthwa kweeNdawo zokuThutha eziThuthi zeNdawo yeNdawo yeNdawo yePlate
iindawo zokungcebeleka ezinxibelelana nomhlaba kwaye zisetyenziselwa ukuhamba komatshini.
Oku kufuna indawo eyomeleleyo kakhulu yesihlangu somkhondo kunye nomdlalo ogqibeleleyo kunye nebhawodi.
Sinokunika uluhlu olubanzi lweemodeli ezahlukeneyo. Kananjalo sinokwenza isampulu ngokusekwe kwiimfuno zakho zokuvavanya iimveliso zethu.
I-BONOVO Iinqwelo ezihamba ngaphantsi kweCandelo le-Excavator Bulldozer Track Link Chain eAsiriya yazo zonke iiMveliso
I-Bonovo ibonelela ngendibano ye-track standard, etywiniweyo kunye ne-lubricated track chain ye-excavators kunye ne-bulldozers, umkhondo wekhonkco ye-track ukusuka kwi-90mm ukuya kwi-317mm.
Sisebenzise unyango olushushu lokuqinisekisa ubulukhuni bekhonkco lomkhondo, izikhonkwane kunye neetyholo nazo zanyangwa ngobushushu ngeqondo eliphezulu lokucinywa ukuqinisekisa ubomi obunxibe nzima.
I-BONOVO Iinqwelo ezihamba ngaphantsi kwesithuthi se-roller roller Carrier SY215C-9 SY225C-9 SY230C6B SY235C-8
Umqengqeleki ophetheyo, inkqubo yokuhlangana ngononophelo kunye neqela lesitywina elityibilikayo elinokuthenjwa liphumeza ukutywina okugqibeleleyo kunye nokuthanjiswa kokujikeleza kwe roller.
I-BONOVO Iinqwelo ezihamba ngaphantsi kweCandelo lokuPhepha okuphezulu okuphathekayo kwi-Carrier Roller d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10
Umqengqeleki ophetheyo, okwabizwa ngokuba ngumqengqeleki ophezulu okanye isondo elingaphezulu eliyinxalenye ebalulekileyo yokuhamba ngaphantsi kwabagrabayo okanye oogandaganda. Banxibelelana ngokusondeleyo nokuhamba emhlabeni, ke ngoko umgangatho we-roller carrier unefuthe elikhulu ekusebenzeni kwesixhobo.
I-BONOVO Iinqwelo ezihamba ngaphantsi kweCandelo lokuPhepha okuphezulu okuphathekayo kwi-EX50 EX100 EX200-1 / 2/3/5 EX270
Isicukucezi esidityanisiweyo esingaphantsi kwesithuthi
Ukunxiba / ukuxhathisa iinxalenye ezihlala ixesha elide
Umgangatho ophezulu we-Excavator Carrier Roller epakishwe ngeepelethi zomthi, ezigcinwe zithe tyaba kwaye ziyikhusele ngononophelo.
I-BONOVO Iinqwelo zokuhamba ngaphantsi kwe-OEM Bulldozer Sprocket Excavator Drive Wheel Sprocket
1.sprocket ilungele ukumbiwa. Digger, kunye ne-machienry ekhethekileyo.
Itekhnoloji yokuphosa ebonakalayo kunye noyilo lolwakhiwo olucwangcisiweyo ukunciphisa uxinzelelo loxinzelelo kunye nokuthintela ukusilela.
Izinto ezizimeleyo eziphandiweyo kunye nonyango olukhethekileyo lobushushu ukuqinisekisa ubulukhuni obufanelekileyo kunye nokusebenza
I-BONOVO Iinqwelo ezihamba ngaphantsi kweCandelo lokuPhepha okuphezulu okuphathekayo kwiCAT320 CAT330 CAT336 PC20 SK60 PC200
I-BONOVO yeeNdawo zokuThutha eziThuthukileyo zokuThutha iNdibano yePlate yezihlangu
I-Bonovo inokubonelela ngeeNdawo ezahlukeneyo zokuThuthwa kwaBantu abaNinzi kwiiBrand Brands kunye noMatshini woMbungu. Ngamava angaphezulu kweminyaka elishumi aBasebenzi abaSebenzela ukuFezekiswa kuyo yonke iNkqubo, iBonovo Qhubeka nokubonelela ngeZinto eziNinzi zaMalungu aQhelekileyo okuThuthwa kweZithuthi kunye nokuSebenza kweNdleko eziBalaseleyo kwihlabathi liphela.
I-BONOVO Iinqwelo zokuhamba ngaphantsi kweCandelo lokuThutha uMqhubi / i-Bulldozer ephezulu yeRoller / iNdibano ephezulu
Umqengqeleki ophetheyo, okwabizwa ngokuba ngumqengqeleki ophezulu okanye isondo elingaphezulu eliyinxalenye ebalulekileyo yokuhamba ngaphantsi kwecrawlerexcavators okanye i-bulldozers.
Ihowuliseyili BONOVO Undercarriage Parts Excavator Track Roller Bulldozer Bottom Roller Assembly
Umkhondo wendlela ekwabizwa ngokuba yiroller engezantsi okanye isondo elisezantsi liyinxalenye ebalulekileyo yokuhamba ngaphantsi kwabagrabayo okanye iigandaganda. Banxibelelana ngokusondeleyo nokuhamba emhlabeni, ke ngoko umgangatho we-roller roller unefuthe elikhulu ekusebenzeni kwezixhobo.
I-BONOVO Iinqwelo ezihamba ngaphantsi kwe-Excavator Umthwalo onzima woMzila we-Wheel ye-Idler
I-BONOVO Iinqwelo ezihamba ngaphantsi kweCandelo le-Bulldozer Track Link D4 D6D D6H D6K D6G
I-Bonovo ibonelela ngendibano yokuqhagamshela umkhondo esemgangathweni, Ezi ziimveliso zethu ezithandwayo zangaphantsi kwesithuthi. Ubungakanani beshishini lethu kuthotho lwamalungu angaphantsi komhlaba ikakhulu zizinto zokungcebeleka ezinxibelelana nomhlaba kwaye zisetyenziselwa ukuhamba komatshini.